Gịnị mere unu ga-ejegharị Na Europe Na Spring | Save A Train
Home > Travel Europe > Gịnị mere unu ga-ejegharị Na Europe Na Spring
Onye ọ bụla na-arọ nrọ nke Spring maka ọkụ weather. Ọ bụ mgbe niile a mara mma oge na Europe mgbe snow nke oyi eme ka ụzọ maka ndị mara ọhụrụ nke spring. Parks na ubi -abịa ndụ ma na obodo laghachi ndụ ọzọ. Ejegharị ejegharị na Europe na mmiri, n'ihu nke n'oge okpomọkụ enugharị, nwekwara a fabulous oge nnukwu na European ìgwè mmadụ mgbe idebe gị na-akwụ ụgwọ ala na enyi na enyi ubu-oge udu. Anyị na-a lee anya na ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị adọrọ adọrọ, na-akpali akpali na pụtara ebe-ejegharị na Europe na Spring.
The mbụ ihe na-abịa n'uche mgbe ejegharị na Europe na mmiri:
Spring Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri na European Markets (na Ụlọ oriri na ọṅụṅụ!)
Airfares bụ ọnụ ala
Hotels bụ ọnụ ala
Rental ụgbọala na-adịkwu mfe idobere na niile ahịa.
Museum s na-adịghị jupụtara
Ụgbọ oloko na-mgbe dị ọnụ ala karịa mgbe ịzụrụ na Save A Train gị Train Tickets.
Na ikpeazụ ma bụghị dịghị ihe ọzọ, Europe bụ home. E nweghị ndị na-eme njem nleta karịrị akarị n'ụlọikpe ha n'okporo ámá na ha mmasị ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ugbu a bụ oge ha nwere ike iri ihe na-egwu na-udo–na na ọ bụ ọnụ ala!
Enwe Food mgbe ejegharị na Europe na mmiri:
Anyị na e dere a ole na ole isiokwu banyere nri. I nwere ike na-agụ ha EBE A na EBE A. N'ihi ya, ọ bụ mba na anya na anyị nwere ihe oriri dị ka a isi nke na-ejegharị na Europe na Spring!
Mgbe ogologo oyi nke ṅara n'ọkụ mgbọrọgwụ akwụkwọ nri, Ndị Rom na-atụ anya a ilu green akpọ puntarella, a ụdị chicory. Ọ bụ a mbubreyo oyi green nke zuru na Lazio. Ọ bụ eweta spring, uwe na a obere mmanụ na chopped azu ankovi. Delish!
Na Italian spring ahịa, ị ga-ahụ ọtụtụ ndị maara ma ọtụtụ ị na-amaghị akwụkwọ nri. E ka ga na-artichokes na mmiri (Daalụ ịdị mma), na ha ga-ọnụ, ma a ga-enwe ọtụtụ iche iche. Anyị mmasị bụ spiny artichokes nke Sicily na Sardinia. Ha na-na na, ghọrọ usoro na shoo pụọ atụrụ; fọrọ ọ bụla osisi ke Sardinia nwere spines!
Ọzọ oddities gụnyere anyị mmasị, agretti, a ala opitoropi ahịhịa nke na ị Sauté na a obere mmanụ na ụfọdụ garlic, sizinin ejighị bụrụ na niile n'ihi na o nwere a saltiness pụta ụwa ya ebe a mụrụ. E nwekwara Cardoons (cardoni na Italian, a ikwu nke atịchok) na yabasị-dị ka bọlbụ na foto a na-akpọ lampascione, n'ezie a kpọmkwem ụdị hyacinth bọlbụ na bụ otu ugboro cucina povera, nri nke ogbenye, na ugbu a ka nnọọ trendy dị ka akụkụ nri na Puglia chekwara “na mmanụ” ma ọ bụ n'okpuru mmanụ.
The ọhịa strawberries nke France bụ a kwesịrị! ọbụna dị ụkọ, bụ strawberries toro na Aveyron na-pụrụ iche na-chara n'onwe mbụ karịa ubi strawberries.
Spring bụkwa mmalite nke a ọnwa abụọ asparagus ememme na Vale nke Evesham na Worcestershire na Cotswolds. White asparagus oge na Germany na n'ebe ugwu nke Europe na-amalite na May.
Ee, ndị mmadụ na Europe na-aga niile si usọrọ asparagus, ọcha, green ma ọ bụ anụ ọhịa dị ka ihe niile pụọ.
Greece nwere ọtụtụ ihe otu mmụọ nke nzukọ na ọtụtụ nke otu spring vegetables ka Italy.
ugbu a, ezu banyere ihe oriri. More banyere n'ezie njem!
Echere m na anyị nile pụrụ ikweta na e nwere mgbe a ọjọọ oge na-aga Paris. Otú ọ dị, e nwere ihe pụrụ iche banyere obodo a nke romance na gastronomic utọ abịa spring oge. Na-eme ka ọ maa kwesịrị ejegharị na Europe na mmiri!
The amara nke Paris ke ini utọ bụ nnọọ akarị. Site picnicking n'ihu eiffel tower na-awagharị awagharị na obodo ọtụtụ nnukwu ubi, dappled wanderings site bịara n'ikperé mmiri nke Seine, anwụ na-acha ụtụtụ n'elu a dị ọhụrụ croissant na latté, husky eves n'elu Pernod na red wine - gbara ya gburugburu na-agbawa okooko chestnut Asherim, blooming gardens, na n'ezie breathtaking-acha anụnụ anụnụ spring ụbọchị.
kwenyesiri ike ma?
The akụkụ kasị mma bụ edoghi. Ma ọ bụ enweghị ha, ikpesịnde. The Louvre na eiffel tower bụ fọrọ nke nta ka oké dị ka Noua.
A nnukwu plus nke mmiri na Paris bụ Nuit des Musée ma ọ bụ Night nke Museums. It’s when museums, art veranda, na omenala emmepe ofụri obodo na-emeghe ha ụzọ maka otu abalị May otú ọbịa nwere ike na-enweta ụfọdụ nke nke kacha mma art ke ererimbot ke a dị nnọọ iche n'ụzọ: kpam kpam free na nnọọ abalị.
Ejegharị ejegharị na Europe na mmiri – Eastern Europe – Hungary:
Mgbe ndị isi awọ dara n'ebe spring, na Hungarian isi obodo n'ezie na-abịa ndụ. Anyị mata nwere ike ikwu na otu idaha ke Budapest abịa Spring. E nwere a dum usu omenala ihe na ngosi ịga. Ọbịa nwere ike n'apata elu kwa afọ Pálinka ememme, featuring tastings nke n'elu 300 ụdị brandi, mgbe opupu Festival, a izu abụọ ikpọ, adọta na ìgwè mmadụ nọ na ya anọ na nke orchestral, Jazz na ụwa music arụmọrụ.
Ebe a bụ oké ndepụta ihe na-eme na Spring na Budapest:
Gbaa ịnyịnya na Budapest Eye Lee cherry okooko na ELTE Botanical Garden
Eri na nri-ụgbọala gardens
Enwe a breezy BKK ugbo na-agba ịnyịnya na-enwe a gluttonous ụbọchị na nri ememme
Peek n'ime mere ihe akụkọ ụlọ n'oge Budapest100 Chọta handicrafts na Budapest Spring Fair Nweta oriri na Sunday ahịa na mbibi Ogwe
Agazu obodo rubberized agba ọsọ tracks
Were chairlift maka a elu-efe efe na-agba ịnyịnya
Gara na ndị gbara ọkpụrụkpụ ngosi inu obodo craft beers na Ofel Hangouts
Na-ekpo ọkụ weather akụkụ nke na-ejegharị na Europe na mmiri – Seville, Spain:
The na-akpali akpali Andalusia isi obodo na-agbawa na ndụ na spring: cafes na ụlọ oriri na ọṅụṅụ uzu na ume. Orange okooko ya na-acha ọcha citrus doo oge ntoju, na omenala kalenda kicks n'ime a dum ọhụrụ gia.
Ọ bụrụ na ị na-enwe obi ụtọ banyere Spring na wanna-eme ya, mgbe ahụ ị na-na na na-nri ebe. Expect weeks, nke partying, ịgba egwú na flamboyant arụmọrụ na cobblestoned n'okporo ámá. Fall na ịhụnanya na flamenco, na-esi na gị rijuru afọ nke ịrịba Andalusia ụgbọ.
N'ihi na a jụụ ihe omume na-enwe mgbe na-ejegharị na Europe na mmiri, isi Seville n'oge ya a ma ama Feria de Abril, ma ọ bụ spring ngosi. The Seville Fair omenala amalite abụọ doro anya n'izu mgbe Easter izu, na a nnukwu ebe ịgba akwụkwọ (map), n'ebe ndịda-n'ebe ọdịda anyanwụ obodo, esote osimiri. Nke a bụ a izu nke oké njọ ịgba egwú, mmanya, eri ihe, na igwa, na abalị – ma ọ bụ ihe niile na-nighters – na-ahụkarị. The n'oké size nke April Fair si n'ahụ ịhụ ihe joro. Site gburugburu ehihie ruo ná mgbede – karịsịa na Tuesday, mbụ ukara ụbọchị – Sevilla otu parades gburugburu fairground na e ji ebu ihe ma ọ bụ na inyinya. E nwekwara kwa ụbọchị ịlụso oké ehi ọgụ, n'ozuzu atụle ihe kasị mma nke oge.
Munich bụ ịtụnanya afọ-gburugburu, ma a ezi isi na-akụta ndị obodo ahụ n'oge ya kwa afọ Fruhlingsfestival, ma ọ bụ spring ememme, ọ bụla April / May. eche Oktoberfest, ma na ụzọ ole na ole ndị mmadụ, ma dị nnọọ biya 😉
The ikpeazụ njem na Europe na mmiri – Dublin, Ireland
N'okporo ámá nke Dublin wupu ndụ a ọnwa maka na ememe nke St. Patrick Ụbọchị. Njem ịga isi obodo na March ga-enwe ọtụtụ ihe weghara ha ntị. Lelee eduzi podcast na-eje ije njem nke Dublin Port, ma ọ bụ ndị a ma ama na-mile-ogologo St. Patrick Festival Na. The ememe n'ihe dum izu ụka, ka na-eme atụmatụ na-agbapụ ìgwè mmadụ na The K Club, a 5-kpakpando mba manor dị 30 nkeji n'èzí Dublin. na a Devid agụghị ndị gbara 1936 Jaguar ụlọ ụgbọ ala, curated wiski tastings, na inyinya ụzọ ụkwụ na 550 acres. Banye anyị elu!
Spring n'ime gia na akwụkwọ na ịzụ tiketi na Save A Train ileta onye ọ bụla n'ime ndị a ebe ụgbọ okporo ígwè, na nkeji!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/traveling-europe-spring/ - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)